विद्युतमा नेपाल सक्षमः अब विदेशलाई विक्री गर्न योग्य ! - दर्पण संसार
विद्युतमा नेपाल सक्षमः अब विदेशलाई विक्री गर्न योग्य !
२०७८ कार्तिक २१, आईतबार १२:५५ बजे
काठमाडौं । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले भारत र बंगलादेशलगायतका छिमेकी देशसँग विद्युत बिक्रीको बाटो खुलेको बताएकी छिन् ।
मन्त्री भुसालले भारतसँग विद्युत व्यापार सुरु भइसकेको र बंगलादेशसँग सकारात्मक ढंगले कुरा अघि बढिरहेको बताइन । उनले भारतसँगको व्यापार दक्षिण एशियाकै पहिलो भएको समेत बताइन ।
मन्त्री भुसालले जलविद्युत क्रमशः बढ्दै गएकोले आन्तरिक खपत बढाउनु पर्ने बताउँदै विद्युत व्यापारले देशकै व्यापार घाटाको अवस्थामा सुधार गर्ने बताइन ।
मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ रेकर्ड सार्वजनिक गरेको छ । यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युतको उच्च माग (पिक डिमाण्ड) १२७० मेगावाट पुगे पनि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ ।
मन्त्री भुसाल, प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय विश्वप्रकाश गौतम र कपिल आचार्य, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकसहितको टोलीले स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्र पुगी लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनको जानकारी लिएको थियो । यस वर्षमा लक्ष्मीपूजाका दिन मुलकभर विनाअवरोध विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ ।